Izinkinobho zeBitbucket ne-SSH > UVielhuber David
Izinkinobho zeBitbucket ne-SSH01
Umhlinzeki i-Bitbucket akayinikezi (noma kumanani entengo asuselwa ku- Standard ne-Premium) ithuba lokugcina okhiye be-SSH ngamalungelo okubhala ezingeni lokugcina. Ukugcina ukhiye wakho we-SSH kuseva yokukhiqiza akuyona inketho, ngaphandle kwalokho ungafinyelela kuwo wonke amanye amaphrojekthi osebenza kuwo njengamanje ukusuka lapho. Kukhona okubizwa ngokuthi okhiye bokufinyelela , kepha lokhu kuvumela amalungelo okufunda kuphela.
Ngakho-ke uma uthuthuka endaweni ethile kuphrojekthi bese uhlanganisa le ndawo yokugcina kuseva yokukhiqiza enokufinyelela kokubhala, kunezinketho ezimbili: Kungaba uzakhela owakho umsebenzisi (onikezwe ilayisensi nabasebenzisi aba-5 abakhokhiswayo) ngale njongo, noma uyisebenzisa ukudluliselwa komenzeli we-SSH ongaziwa.
Ngale nqubo, ungasebenzisa kabusha ukhiye wakho we-SSH wasendaweni kuseva ekude kuseshini yamanje ngaphandle kokugcina unomphela ukhiye lapho. Ukusetha kulula: Okokuqala uyaqiniseka ukuthi ungaxhuma ngqo kuwo womabili amaseva akude ne-Bitbucket usebenzisa ukhiye wakho we-SSH. Ngemuva kwalokho uqala i- ejenti le-SSH emshinini wakho wasendaweni nge- eval `ssh-agent -s` bese ugcina ukhiye wakho wamanje nge- ssh-add -k . Ngokudluliswa kwe-ejenti kusebenza, manje usungaxhuma kwiseva ekude nge- ssh -Igama lomsebenzisi @ host1 bese ufinyelela endaweni yakho yokugcina ye-Bitbucket ngaphandle kokufaka ukhiye weserver eyi-SSH lapho.
Enye ehlukile kuyinto ukushintshela umhlinzeki ehluke ngokuphelele: GitLab, isibonelo, kakade inikeza quota-10 GB (kuqhathaniswa 2 GB nge Bitbucket) kanye nenombolo enganqunyelwe umsebenzi kwamalungu amaqembu kanye okuthiwa wokuphakela okhiye kule tariff khulula. Lokhu kusho ukuthi noma iyiphi inombolo yokhiye abengeziwe be-SSH (isb. Kusuka kuseva yokukhiqiza) ingagcinwa endaweni yokugcina ngayinye, enikeza ukufinyelela kokubhala endaweni yokugcina izinto.